Commericialတစ်ခုအတွက် ရေကူးကန်အဟောင်းကြီးကို ရေတွေဖြည့် ရေအောက် sceneတွေ ရိုက်ကူးပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ6meterမြင့်တဲ့ ရေကူးကန်ကြီးကို ရေပြန်ထုတ် သိမ်းစရာရှိတာ သိမ်းစည်းဖို့ 'Day'တစ်ယောက် ပြန်ရောက်လာပါတယ်.. ဘယ်သူမှ မရှိတော့တဲ့ ရေကူးကန်ထဲ ရေဆင်းကူးရင်း ရေထဲက ရေပေါ်လေအိတ်အိပ်ယာလေးထဲ ခဏတစ်ဖြုတ် တစ်ရေးမှေးစက်မိရာကနေ ပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှတော့ ရေကူးကန်ရဲ့ ရေတစ်ဝက်လောက်ကရော့ နေတာကို သိရှိသွားပါတော့တယ်.. လှေကားမရှိတဲ့ ရေကူးကန်အဟောင်းကြီးကို ရေထဲကနေ ဘယ်လိုမှ တက်ဖို့ ကြိုးစားလို့မရတဲ့အပြင် အနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့အခြေအနေ.. မထင်မှတ်ထားပဲ ဖုန်းကလည်း ရေထဲကျပြီး ဖုန်းပါဆက်မရတော့တဲ့အပြင် ရေတွေကလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းကျလာပြန်တယ်.. ကယ်သူမဲ့ ရုန်းကုန်ကြိုးစားရင်း ပင်ပန်းလာတဲ့ အချိန် လေအိတ်အိပ်ယာပေါ်မှာ ပြန်ပြီးအနားယူ မှေးစက်နေတုန်းမှာ Dayရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး Koyရောက်လာပြီး ရေကူးကန် Diving ထိုးတဲ့နေရာကနေ ချော်ကျ ခေါင်းထိပြီး ရေထဲ ပြုတ်ကျလာတဲ့ အခါ... ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာဆိုသလို ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝန်းရေကြီးမှုတွေကနေ ရောပါလာတဲ့ မိချောင်းတစ်ကောင်ကလည်း ရေကူးကန်ထဲ ကျလာတဲ့အခါ.. ခေါင်းဒဏ်ရာနဲ့ သတိလစ် မေ့မျောနေတဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးရယ်၊ ရေတွေ လုံးဝကျတဲ့အထိ နှစ်ယောက်လုံး အပေါ်ဘယ်လိုမှတက်လို့ရအောင် ကြံဆလို့မရတဲ့ Dayရယ်ဟာ 6Meterနက်တဲ့ ရေကူးကန်ထဲေ၇ာက်လာတဲ့ မိချောင်းရဲ့ ရန်ကနေပါ ကာကွယ်ရဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ.. အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူမရှိပဲ 6Meterနက်တဲ့ ရေကူးကန်ထဲ ဘယ်နှစ်ရက်ကြာအောင် ပိတ်မိနေမလဲ၊ မိချောင်းကြီးရဲ့ ရန်ကကော နှစ်ယောက်လုံး လွတ်မြောက်ပလား၊ ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာဆိုတဲ့အတိုင်း မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးတွေကြီးနဲ့ပဲ ကြုံနေရတဲ့ Dayတို့ဟာ အသက်ရှင်ရက်နဲ့ ပြန်လွတ်လာပမလားဆိုတာတော့. သရုပ်ဆောင်များ - Ken Theeradet Wongpuapan
Commericialတစ်ခုအတွက် ရေကူးကန်အဟောင်းကြီးကို ရေတွေဖြည့် ရေအောက် sceneတွေ ရိုက်ကူးပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ6meterမြင့်တဲ့ ရေကူးကန်ကြီးကို ရေပြန်ထုတ် သိမ်းစရာရှိတာ သိမ်းစည်းဖို့ 'Day'တစ်ယောက် ပြန်ရောက်လာပါတယ်..
ဘယ်သူမှ မရှိတော့တဲ့ ရေကူးကန်ထဲ ရေဆင်းကူးရင်း ရေထဲက ရေပေါ်လေအိတ်အိပ်ယာလေးထဲ ခဏတစ်ဖြုတ် တစ်ရေးမှေးစက်မိရာကနေ ပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှတော့ ရေကူးကန်ရဲ့ ရေတစ်ဝက်လောက်ကရော့ နေတာကို သိရှိသွားပါတော့တယ်..
လှေကားမရှိတဲ့ ရေကူးကန်အဟောင်းကြီးကို ရေထဲကနေ ဘယ်လိုမှ တက်ဖို့ ကြိုးစားလို့မရတဲ့အပြင် အနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့အခြေအနေ..
မထင်မှတ်ထားပဲ ဖုန်းကလည်း ရေထဲကျပြီး ဖုန်းပါဆက်မရတော့တဲ့အပြင် ရေတွေကလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းကျလာပြန်တယ်..
ကယ်သူမဲ့ ရုန်းကုန်ကြိုးစားရင်း ပင်ပန်းလာတဲ့ အချိန် လေအိတ်အိပ်ယာပေါ်မှာ ပြန်ပြီးအနားယူ မှေးစက်နေတုန်းမှာ Dayရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး Koyရောက်လာပြီး ရေကူးကန် Diving ထိုးတဲ့နေရာကနေ ချော်ကျ ခေါင်းထိပြီး ရေထဲ ပြုတ်ကျလာတဲ့ အခါ...
ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာဆိုသလို ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝန်းရေကြီးမှုတွေကနေ ရောပါလာတဲ့ မိချောင်းတစ်ကောင်ကလည်း ရေကူးကန်ထဲ ကျလာတဲ့အခါ..
ခေါင်းဒဏ်ရာနဲ့ သတိလစ် မေ့မျောနေတဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးရယ်၊
ရေတွေ လုံးဝကျတဲ့အထိ နှစ်ယောက်လုံး အပေါ်ဘယ်လိုမှတက်လို့ရအောင် ကြံဆလို့မရတဲ့ Dayရယ်ဟာ 6Meterနက်တဲ့ ရေကူးကန်ထဲေ၇ာက်လာတဲ့ မိချောင်းရဲ့ ရန်ကနေပါ ကာကွယ်ရဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ..
အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူမရှိပဲ 6Meterနက်တဲ့ ရေကူးကန်ထဲ ဘယ်နှစ်ရက်ကြာအောင် ပိတ်မိနေမလဲ၊ မိချောင်းကြီးရဲ့ ရန်ကကော နှစ်ယောက်လုံး လွတ်မြောက်ပလား၊
ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာဆိုတဲ့အတိုင်း မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးတွေကြီးနဲ့ပဲ ကြုံနေရတဲ့ Dayတို့ဟာ အသက်ရှင်ရက်နဲ့ ပြန်လွတ်လာပမလားဆိုတာတော့.
- Ken Theeradet Wongpuapan
ဒါရိုက်တာ Ping Lam Phra Bring